Wararka - U fiirso waxyaalahan ka hor intaadan isticmaalin mashiinka nadiifinta hadhuudhka
Mashiinka baarista hadhuudhka ayaa ah qalab lagama maarmaan u ah wax soo saarka beeraha ee casriga ah, waxaana inta badan loo adeegsadaa baaritaanka, kala saarista iyo nadiifinta wasakhda ah ee qamadiga, galleyda iyo miraha kala duwan. Adigoo ah Nadiifiyaha Abuurka iyo Soosaaraha Darajada, kula wadaag Marka xigta, aan ka hadalno dhowr arrimood oo ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho ka hor inta aan la isticmaalin mashiinka baarista hadhuudhka.
1. Ku rid mishiinka meel siman oo ku rakib qalabka ilaalinta korantada.
2. Hubi in qaybta gudbintu ay dabacsan tahay ama ay dhacayso, gaar ahaan matoorka gariirka.
3. Hubi in boolalku la adkeeyey iyo in kale, jirka shaashaduna waa inuu asal ahaan la dheellitiro taayirrada dhulka.
4. Hubi inay ku jiraan walxo shisheeye marawaxada weyn iyo marawaxad nuugid.
5. Hubi jihada marawaxadu u socoto.
Mashiinka nadiifinta hadhuudhka ee isku-xidhka isku-xidhka ayaa bedeli kara shaashadda iyadoo loo eegayo xajmiga miraha, taas oo ku habboon galleyda, soybean, sarreenka, bariiska, miraha gabbaldayaha iyo miraha kale ee kala duwan. Wax boodh ah lama dhalin inta lagu jiro nadiifinta hadhuudhka, taas oo si weyn u beddesha jawiga shaqada ee mashiinka. Alaabta waxaa lagu qalabeeyay marawaxad centrifugal ah, boodh ururiye, iyo soo-saare hawo xidhan. Way fududahay in la dhaqaaqo, iyo shahaadada nadiifinta waxay gaari kartaa in ka badan 90%. Awoodda nadiifinta waa: 10 tan / saac.
Shuruudaha tignoolajiyada ee diyaarinta hadhuudhka waa in lagu xaqiijiyaa iyadoo la kaashanayo qalabka u dhigma. Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo loo marayo horumarinta mashiinnada hal si ay u dhamaystiraan qalabka qalabka iyo dheefshiidka iyo nuugista qalabka dibadda laga keeno, qalabka farsamaynta hadhuudhku wuxuu buuxiyey shuruudaha tignoolajiyada farsamaynta ilaa xad. Si loo sii wanaajiyo heerka horumarinta iyo in waxqabadka farsamada ee qalabku uu buuxiyo shuruudaha naqshadeynta, oo uu daboolo baahida goobta shaqada iyo deminta qalabka, iyadoo la tixgelinayo qaabka iyo farsamada qalabka, waxaa lagama maarmaan ah in fiiro gaar ah loo yeesho. si loo tijaabiyo cabbirada farsamada iyo waxqabadka qalabka si loo buuxiyo shuruudaha habka wax-qabadka ee sii kordhaya.
Dayactirka mashiinka xulashada hadhuudhka:
1. Goobta baabuurta la dhigto ee mashiinka xulashada waa in ay ahaataa mid siman oo adag, iyo goobta baarkinka waa in loo tixgeliyaa mid ku habboon qaadista boodhka.
2. Kahor inta aan la hawlgalin, hubi in furayaasha isku xirka qayb kastaa ay adag yihiin, in qaybaha gudbinta ay si dabacsan u wareegaan, haddii ay jiraan dhawaaqyo aan caadi ahayn, iyo in xiisadda cajaladda gudbinta ay ku habboon tahay.
3. Marka la beddelo noocyada kala duwan inta lagu jiro hawlgalka, qaybaha abuur ee haray ee mishiinka waa in la nadiifiyaa, iyo mishiinka waa in ay sii wadaan in ay socdaan 5-10 daqiiqo. Isla mar ahaantaana, beddel gacan-qabsiga hagaajinta mugga hawada hore iyo dambe dhawr jeer si aad u baabi'iso kaydadka hadhay ee qolalka hore, dhexe iyo dambe. Noocyada iyo wasakhda.
4. Haddii ay xaddidaan shuruudo oo ay tahay in ay ka shaqeyso bannaanka, mishiinka waa in la dhigaa meel gabbaad ah oo la dhigaa hoos-u-dhac si loo yareeyo saameynta dabaysha ee saameynta xulashada. Marka xawaaraha dabayshu uu ka weyn yahay heerka 3, rakibidda caqabadaha dabaysha waa in la tixgeliyaa.
5. Meelaha saliidda lagu shubo waa in lagu shubaa shidaal ka hor qalliin kasta, waa in la nadiifiyaa oo la baadhaa marka la dhammeeyo, khaladaadkana waa in la tirtiraa waqtiga.
Shirkaddayadu waxay kaloo iibisaa abuur nadiifiyaha iyo grader, ku soo dhawoow inaad nala soo xidhiidho.